मबि सिंह, (बोस्टन)
हरेक यात्रीका गति रोक्दै हिँड्छौ !
नजाने गाउँको बाटो सोद्धै हिँड्छौ !
कि म पत्झडमा रम्दा असह्य भो?
झरेका पातमा रङ्ग पोत्दै हिँड्छौ !
सुन्दै छु आफ्नै बारेका नयाँ कथा
हुँदै नभएका कुरा बोल्दै हिँड्छौ !
आँउदा जाँदा बेवास्ता हुन थाल्यो
गल्लीमा नक्कली खोकी खोक्दै हिँड्छौ
शिर भारी भएको या भक्तीभाव ?
मूर्ती देखे जती सबै ढोग्दै हिँड्छौ !
थोत्रो गाडीको नयाँ सिटमा यात्रा !!
जहाँ रोक्यो त्यैं गन्तव्य खोज्दै हिँड्छौ !
भीरबाट लड्दा चोट कांहि नाई
घाईते पार्न उँचाई खोज्दै हिँड्छौ !